शनिबार घरमा यी ५ कुरा नल्याउनुहोस् , नत्र आउनेछन् गरिबी, संकट – Setosurya
शनिबार घरमा यी ५ कुरा नल्याउनुहोस् , नत्र आउनेछन् गरिबी, संकट
एजेन्सी । हाम्रो नेपाली समाजमा थुप्रै मूल्य मान्यताहरु रहेका छन् र त्यस्ता कतिपय मान्यताहरु हामी चाहेर पनि नकार्न सक्दैनौ । हाम्रा पूर्वजहरुले मान्दै आएका कतिपय कुराहरु शनिबारसँग पनि जोडिएका छन् ।
शनिदेवमाथि नराम्रो असर नपरोस् भनी हाम्रा पूर्वजहरुले थुप्रै नियम बनाएका छन् । ज्योतिषका अनुसार शनिको असरबाट बच्नका लागि यस्ता मान्यताहरु छन् जसलाई शनिबारका दिन हामीले गर्नुहुँदैन । शनिबार जन्मने व्यक्तिले अवश्य पढ्नुहोस् आउनुहोस् यस्तै केही कामबारे जुन हामीले शनिबारको दिन गर्दा शनिदेव रिसाउँछन् भन्ने मान्यता छ ।
तेल : तेललाई शनिको अतिप्रिय मानिन्छ र शनिबार तेल दान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दिन तेल घरमा ल्याउँदा घरमा गरिबी र रोग निम्तिने गर्दछ ।
जुत्ता : शनिलाई खुट्टाको कारक ग्रह मानिएको छ । यसकारण शनिबार जुत्ता खरिद नगर्दा राम्रो । यस दिन जुत्ता खरिद गर्दा रोगको सामना गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ ।
अन्न : शनिबार अन्न पिस्न नदिनुहोस् र यसको खरिद पनि नगर्नुहोस् । यसो गर्दा परिवारमा कलह रहिरहन्छ र शनिबार पिनेको पिठोले घरमा गरिबी निम्त्याउने मान्यता छ । शनिदेवलाई प्रशन्न गर्नका लागि शनिबार गर्नुहोस् यी उपाय, पूरा हुनेछ मनोकामना
नुन : घरका लागि सर–सामान किन्दै हुनुहुन्छ भने शनिबारको दिन नुन किन्नबाट बच्नुहोस् । शनिबार नुनको खरिद गर्दा घरमा ऋण लाग्ने बताइन्छ ।
फलाम : शनिबार फलामले बनेको सामान खरिद गर्नु हुँदैन । फलामलाई शनिको धातु मानिन्छ । यस दिन फलामको दानको महत्व छ । यस दिन फलाम खरिद गर्दा शनिदेव रिसाउने मान्यता रहिआएको छ ।
प्रचण्डले सरकार छाड्न सक्छन्
रेशम चौधरी काठमाडौं आइपुगे: वीर अस्पतालको ‘इमर्जेन्सी’मा : डाक्टरले भने…..
फलेबास नगरपालिका भित्र सडकको मापदण्ड तयार हुँदै, मापदण्ड तयार नहुँदा सम्म संरचना निर्माण रोक्यो
ठकुरीको मृत्युलाई लिएर पूर्वजर्नेलमाथि कुटपिट
प्रदेश नं. २ मतपरिणाम ः दिउँसो ३ः४५ सम्मको ताजा अपडेट यस्तो छ……….
माओवादीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले पार्टी परित्याग गरे सिंगो कमिटी नै एमालेमा प्रवेश
पर्वतका सांसद पदम गिरी भन्छन् – वनलाई दिगो उद्यममा जोड दिनुपर्छ
आजका ताजा खबर र्हेनको लागी http://setosurya.com/ गुगलमा सर्च गर्नुहोस…..
बाल मैत्रि सम्वन्धि २ दिने तालिम सम्पन्न
पर्वत चुवाका रविन सहित ३ नेपाली गोर्खा सैनिकको काश्मिरमा मृत्यु
प्रकाश दाहालको मृत्यू सहज नभएको भन्दै प्रचण्डले ३ प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर दिए यस्तो निर्देशन
ओली-स्वराज भेटबार्ता जारी : स्वराजले सुनाइन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोगमा प्रयोग भएको सांसदको हस्ताक्षर कीर्ते !
एमाले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठकः यस्तो आयो निर्णय
पर्वतमा सुन्तला उत्पादनमा कमी आउँदा कृषक मर्कामा
जब नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र देबीको मायाँ झाँगिदै गयो (भिडियो सहित)…………….
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको निष्कर्षः सरकारलाई मिति तोक्ने अधिकार दिएसम्म कुनै चुनाव हुँदैन
बैज्ञानिक भन्छन ‘यो रोग सेक्स गर्दा तुरुन्तै ठीक हुने गर्छ’ भिडियोसहित
पर्वत पुगेर एमाले नेता माधव कुमार नेपालले भने-‘बैशाख ३१ गते चुनाव हुनेमा आशंका छ’
पर्वतकाे देउपुरमा निर्माणाधिन मध्य माेदीका कारण घरबास नै उठिबास भएपछि माेदी गाउँपालिकाकाे शरणमा……..